China Cat Scratch Cat play pad abavelisi kunye nabathengisi | Uhlobo
Igama lemveliso: Cat ekuqaleni Cat ukudlala pad
Inombolo yomzekelo: 2
Ubunzima (g): 570g
Ubunzima bobunzima (kg): 7.8kg
Ubunzima bomzimba (kg): 6.8kg
Ubungakanani beCarton (cm): 60x37.5x50
Ingasetyenziselwa ukuzilungisa ngokwazo ikatsi kunye nokuthambisa, ibrashi yokulungisa ikati, ukukrwitsha kunye nokudlala ngeethoyi ukugcina iikati zisonwabisa kangangeeyure.
I-arch yokulungisa iqulethe ii-bristles, ezisusa ngobunono iinwele ezingaphezulu okanye ezikhululekileyo njengoko ikati yakho ikhuhla okanye idlula ngaphezulu.
kwaye ikwanceda ukulawula ukulahleka kweenwele ekhaya.
Isiseko sokuqala esomeleleyo:
Iikhaphethi ezihlala ixesha elide zivumela iikati ukuba zilole i-PAWS yazo ngokuxubana rhoqo, zibe nesikratshi esifikeleleka ngokulula kwikati yakho okanye kwiKitty, kwaye zikuncede ukukhusela ifanitshala yakho.
Ezi bristles ayisosixhobo sokuzilungisa kuphela, zilolonge ikati yakho njengoko iziphulula ngaphezulu nakumacala e-arch.
Ikwabonisa uyilo oluvulekileyo lokuvula olubandakanya ikati ukunceda ukutsala ikati yakho oyithandayo!
Ukucoca okulula kunye nendibano:
I-self-beautician ayifuni izixhobo ezilungiselelwe indibano engenazingxaki.
Kwakhona, ukucoca kulula njengokusebenzisa i-roller roller, isicoci sokucoca izandla kunye / okanye isicoci esicocekileyo ukususa iinwele eziqokelelweyo.
Egqithileyo Umzi-mveliso unikezela ngokuthe ngqo ngokuhamba ngentonga yabantu abadala - Inqanawe eshukumayo-iTwin Grip-Uhlobo lwasekhaya
Okulandelayo: Hover iHockey yomoya
INdebe yeNdebe yeMoto eyandisayo, Izixhobo zokuCoca imoto, Ipleyiti yePlastiki enokuphinda isebenze, Sela imoto yokubamba, Izibuko zelanga zangokwezifiso, Amacwecwe ePlastiki alukhuni,